Rindrambaiko fanangonana data Biomed Data - Medical Aid International
Rindrambaiko fanangonana data Biomed Data
Ao anatin’ny fanoloran-tenanay amin’ny injeniera Biomedika dia namorona fitaovana fanangonana data izahay izay ahafahanay manara-maso hetsika isan-karazany amin’ity faritra ity. Afaka ampiasaina malalaka, hahafahantsika rehetra mijery fomba hanatsarana ny fanohanan’ny Biomedical Engineering amin’ny LMICs. Ny tatitra santionany, miorina amin’ny angon-drakitra phantom dia azo jerena Eto , hijerena ny fijeriny amin’ny tsindry finday na takelaka Eto . Liana te hahalala bebe kokoa? Mifandraisa amin’ny mpanolotsaina mpitsabo anay, Dr Roy Miller ao amin’ny roy@medaid.co.uk
Famintinana ny fampiharana Biomed Data fanangonana